Ezibekekeleyo ekubukeni Northern Italy By Train | Gcina A Isitimela
ekhaya > Uloliwe kuhambo Italy > Ezibekekeleyo ekubukeni Northern Italy By Train
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/02/2020)
Italy is one of the most popular countries in Europe to visit because of the variety of oya kuyo phakathi kwayo imida. Northern Italy i isemsini yenkulumbuso xa kuziwa inkcubeko Italian, esingaka ukuba abahambi ukubona nokwenza. Nokuba kwesampulu iwayini entle kwaye zidla cuisine-class umhlaba okanye ukuhlola yamandulo iinqaba yaye amabandla, le ndawo linikeza amava awodwa ukuba nawe umthande. Kukho ezininzi yezindawo ukuba uhlole Northern Italy, ngoko ke ukuba une ngeveki okanye ezimbini ukuchitha e Italy, ubophelelekile ukuba ukufumana kwezinye iindawo ukuze captivate kuwe. Nazi ezimbalwa iingcebiso iindawo abaza kutyelela xa ezibekekeleyo ekubukeni Northern Italy ngololiwe.
Begin your Touring Northern Italy By Train ngo milan
Qala utyelelo yakho Northern Italy e Milan, capital fashion zehlabathi. Nomzi uzele ubambe Renaissance bokwakha, icawa Amazing kunye nemisebenzi-class ehlabathini art. Iindwendwe nako ukuthatha uhambo lokuya ngosuku ukuya amachibi Italian and Southern Alps kummandla kule ombaxa liyana. Milan naye ekhaya Milan Central, yaye kucingelwa ukuba yenye yezona European kakhulu elihle kwizikhululo zikaloliwe. Le ndawo ogqibeleleyo ukuqalisa uhambo lwakho lwe Northern Italy.
La Spezia eMilan Uqeqesha
Parma eMilan Uqeqesha
Salerno eMilan Uqeqesha
Lo loliwe Uhambo ukusuka Milan eVenice ziiyure uqobo ezimbini ezinesiqingatha, with plenty of indawo train abahambi ungabona kwi window yakho buyo. Ukususela mzuzu ushiya kwisikhululo sikaloliwe e Venice, uyakwazi ukubamba amagqabantshintshi i-Grand Canal omkhulu, apho zonke hlobo watercraft kungabonwa engahambi yi. Venice, wenziwe 118 iziqithi enxulumene yi imizila zahlukanisa yi misele. Esi sixeko omangalisayo laziwa kakhulu ngobuhle bayo, bokwakha, azobe izitalato zenziwe ngamatye agranyagranya. Mhambi ayikwazi ukunceda, kodwa kuwa uthando nale ndawo ndisangqengqile. Ezibekekeleyo ekubukeni Northern Italy ngololiwe akaphelelanga ngaphandle utyelelo eVenice.
Florence, emzini ekuvuselelweni odumileyo, iqhele iiyure ezintathu ngololiwe eVenice. Xa kufika kule ndawo, phantse zonke iindawo enkulu ikumgama ukuhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe. Njengoko ikomkhulu kummandla Tuscany, Florence inama ukutya emangalisayo kunye isiselo somdiliya, ihamba ne olondolozo lwembali-class umhlaba. Yiya izinto lenkundla, kubandakanywa i ezinyathela Ponte Vecchio eyaziwa ngokuba 'Bridge Old', i ezinde Florence Duomo kunye sculpture kaMichelangelo, kaDavide.
Cinque Terra – Ezibekekeleyo ekubukeni Northern Italy By Train
Yenza Cinque Terra stop wakho wokugqibela – kulo mmandla mihle kuphela nje iiyure ezimbalwa ngololiwe uFlorence. Cinque Terra akanayo myuziyam okanye langutana imbali sites kodwa ke icandelo ngokumangalisayo Riviera Italian eye kuyekwa zingabanjwanga. Emva kweentsuku of ezibekekeleyo ekubukeni Northern Italy ngololiwe, le ndawo egqibeleleyo ukuze Italy ongokwemvelo imbonakalo-mhlaba. Unxweme esentabeni ngumxube emaweni kunye izidiliya pretty emihlanu amahle kude kwiidolophana ekulotywa.
Reggio Emilia ku Levanto Uqeqesha
Genoa ku Levanto Uqeqesha
Sestri Levante ku Levanto Uqeqesha
Parma ku Levanto Uqeqesha
Iidolophu oxhulumene kuphela ngeenqanawa, imikhondo bentaba kwaye lwelayini kaloliwe ikhosi. Phonononga emaweni esimhlophe kwaye kangcono kwenye cafes gorgeous ngcu headlands ezilulwalwa elibheke izibuko. Lo mmandla esihle ngokwenene umoya-ukuthatha – indawo ephelele ukuba ukuphinda-lingakunika. Ukusuka apha ungakwazi ukuthatha uloliwe wabuyela Milan apho Uhambo ikhaya lakho.
Ngaba ngohambo Northern Italy ngololiwe? Let us know the favorite places that you have visited by tweeting us at @SaveATrain! siya kusebenza kuzo zonke iindlela loluntu, phuma Saveatrain
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ke Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-northern-italy-by-train%2F%3Flang%3Dxh – (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#cinqueterra Italy milan northitaly ukuhamba-hamba travelitaly travelvenice
Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe